Ukudla nge-ulcerative colitis
I-ulcerative colitis yisifo esibangela ukuvuvukala-i-dystrophic autoimmune esithinta i-membrane emangcwabeni emathunjini amakhulu. Kokubili ngesikhathi nangemva kokwelashwa, ukudla okunempilo kuyadingeka. Ukuze ungaphazamisi inqubo yokutakula, kubalulekile ukunamathela ekudleni okhethekile kwesifo sofuba esiswini emathunjini.
Kumele kube yikuphi ukudla kokulonda kwe-ulcerative colitis?
I-colcer ulcerative idinga ukudla okusekelwe ezimisweni zokudla okunomsoco okunempilo : konke okuvinjelwe, okuthosiwe, okunamafutha akuvunyelwe, futhi kufanele kudliwe izikhathi ezingu-4-6 ngosuku ezingxenyeni ezilinganisiwe. Yilolu hlobo lokudla oluvumela amathumbu ukuba alulame ngendlela ejwayelekile.
Lapho upheka, kufanele usebenzise inkabi elula noma inhlanzi yezinhlanzi. Kulokhu, udinga ukuqinisekisa ukuthi amaprotheni anele anikezwa ukudla (ikakhulukazi isilwane). Kuyaziwa ukuthi iziguli eziningi zihlushwa ukudla okubangelwa yizinto zokudla ezibangelwa ubisi emaprotheni, ngenxa yokuthi yonke imikhiqizo yobisi ekudleni kufanele isuswe. Okuhlukile kuphela ibhotela elicibilikile. Isinkwa esisha, ama-pie namaswidi ngaphansi kokuvinjelwa okuqinile.
I-contraindicated kukho konke ukudla okuqukethe i-fibre: ibhakede, yonke imifino nezithelo. Esigabeni sokuxoxwa, ungafaka u-broccoli, utamatisi, i-zucchini kanye ne-izaqathe ngobuningi obulinganiselwe. Ehlobo, kuyinto efiselekayo ukwengeza amajikijolo nezithelo.
Kufanele kucatshangelwe ukuthi i-motility emathunjini yenyuka ngemuva kwesifo, ngakho-ke kuyadingeka ukwengeza ekudleni lezo zimikhiqizo eziyinciphisa: lezi yizinhlanzi, ama-cereals anezinyosi, ama-decoctions wezinyoni ze-cherry nama-blueberries. Izinsizi zokungafani kahle, itiye elimnyama neluhlaza liyamukelwa.
Zonke izitsha kufanele zithathwe zingashisi futhi zingabanda, kodwa kuphela efomeni elifudumele.
Ukwelashwa okulonda ulwelative emathunjini: ukudla kokudla
Ukwelashwa kwe-ulcerative colitis kanye nokudla kufanele kuhlukaniswe komunye nomunye. Cabanga ngokudla okulinganayo usuku ngalunye:
Ukudla kwasekuseni: i-rice iphariji nebhotela elicibilikile kanye ne-steam chop, itiye.
Isidlo sasekuseni sesibili: amagremu angu-40 (ucezu omncane omncane) wenkomo yenkomo ebilisiwe kanye ne-jelly.
Usuku lokudla: isobho sezambane, ilayisi elinenyama enobuthi, i-compote yezithelo ezomile .
Ntambama ukudlala: itiye nge-1-2 breadcrumbs.
Isidlo: i-steam cutlet namazambane ahlambulukile, indebe yetiyi.
Ngaphambi kokulala: i-apple ebhaka.
Ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa ukudla, buza udokotela wakho ukuthi ngabe kulungile yini kuleso simo.
Ukudla ngeqembu legazi - incazelo eningiliziwe
Ukudla okumnandi kwi-shrimps
Ukudla nge-hepatitis C
Ukudla kweDucane - Ukudla Okuvunyelwe
Ngabe mnandi uTina Karol?
Ukudla nge-peptic ulcer isifo
Ukudla okungewona ama-carbohydrate
I-Watermelon yokudla - isuse 10 kg ngesonto
Izandla ezivela ephepheni lezindlu zangasese
Isifo sika-Parkinson - ukubuka kanjani ukubonakaliswa kokuqala nokuthi yini ongayilindela?
Amafutha kaSesame ebusweni
UKristen Stewart eCannes ngo-2016
Ukubeka imfashini 2015
Usuku Lwamanye Amazwe Wezinkokhelo
Ungenza kanjani ukushisa ngezandla zakho?
I-Gucci Collection - Spring-Summer 2015
Imiphi imikhiqizo ikhula kancane?
Kanjani ngokunembile kuya ku-fry cutlets?
Imihlobiso yokugqoka okubomvu
Ifomu le-Paroxysmal ye-fibrillation ye-atrial
I-Gatchina - ezikhangayo